काण्ड उही, त्यता मात्रै शंकाको सुई ! | Ratopati
personपत्रपत्रिकाबाट exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर ४, २०७६ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ । मुद्दा उस्तै–उस्तै हुन्, तर व्यवहार फरक–फरक ! निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । समातिएको मान्छे पनि छुटेका छन्, मानसिक सन्तुलन गुमाएको र डिएनए नमिलेको नाममा ।
त्यसबारे जाहेरीमाथि जाहेरी परेको परेकै छ । निर्मलाकी आमाले पनि तीन महिनाअघि दिलिपसिंह विष्टकै नाममा अर्को किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । करीब–करीब पत्ता लागिसकेको छ, दोषी को हो भन्ने कुरा । तर, उनले उन्मुक्ति पाउँछन्, मानसिक सन्तुलन ठीक छैन भन्ने नाममा । कसुरदार उनै हुन् भनेर रीतपूर्वकको लिखित जाहेरी परेको छ ।
बयान लिखित र भिडियोमा सुरक्षित नै छ । तर, ऊ छुट्छ ।
सँगसँगै यही देश हो, सभामखु जस्तो पदमा रहेको मान्छेविरुद्ध परेको उजुरीमा जाहेरवालीले पटक–पटक बयान फेर्ने, निवेदन नै दिएर जाहेरी फिर्ता माग्ने, इन्कारी बयान दिन आफै लगातार अदालतमा उपस्थित हुँदा पनि त्यसको वैज्ञानिक जाँच गरिएको छैन । न त त्यसलाई आधार–प्रमाण नै मानिएको छ । उनी आफैले मेरो मानसिक स्थिति ठीक छैनभन्दा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छैन । बरु दशकौँदेखिको सम्बन्धकै निरन्तरतास्वरुप घटनास्थलमा पाइला टेकेको तर करणी प्रमाणित नभएको कसुरमा महरा अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका छन् ।